Gini ka nwanyi kwesiri inwe obi uto? Ọ bụghị nanị na ịja mma sitere n'aka nwoke na-ahụ n'anya, kamakwa ịhụ na ị dị mma. Ihe oyiyi a na-akwado ya mgbe nile site n'ichepụta ihe ejiji, uwe ndị a họọrọ nke ọma, na, akwa uwe nwanyị mara mma.
Ụdị aha ndị inyom mara mma
Ọnyà . Kedu ihe m nwere ike ikwu, ma ihe dị ka iri afọ anọ, onye na-emepụta ihe na-atọ ụtọ nke Ịtali na-atọ ụtọ na-amasị ndị agbụrụ ha na ngwaahịa ndị dị mma. A na-eji ihe ndị dị elu na-eme ihe na-eme ka ọkpụkpụ na ngwa ngwa. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta bras nwere iko dị iche, eriri. A na-ejikwa ihe nkedo eme ihe. Ekele maka njikọ ahụ, ihe a na-eme ka ọ dị ntakịrị.
Ihe nzuzo Victoria . Ònye na-enweghị nrọ nke ịnweta uwe mara mma nke ika a dị ka onyinye? Nchịkọta dịgasị iche iche na-abụ ihe ijuanya mgbe nile. Otú ọ dị, maka iwu ọnụahịa, ngwaahịa ndị a ma ama ọ bụghị nanị n'ihi àgwà ha, ụdị ha, kamakwa n'ihi ọnụahịa ha. N'agbanyeghị nke a, nwanyị ọ bụla nke ejiji nwere ike ịchọta ihe n'onwe ya n'etiti ọtụtụ ndị na-emepụta akwa uwe America.
Milavitsa . Na mmalite nke narị afọ nke 20, a kpọrọ Belarusian "Francois Tournier". N'afọ 1991, e degharịrị aha ya ọzọ, ma ụdị ndị ahụ ka na-ejigide aka nke French romanticism na okomoko. Onye na-emepụta ụlọ na-emepụta akwa uwe, ma maka ndị nne na ndị inyom, bụ ndị na-ele anya dị ka sexy n'ọnọdụ ọ bụla. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta uwe ime mma mara mma nke ihe dị elu, ihe eji eme akwa na akwa na helium jupụtara nke dị mma maka ahụ ike.
Mmeri . Nhọrọ dị iche iche nke stampụ German dị oke mma. Nke kachasị mma bụ na na otu afọ, ụlọ ọrụ ahụ na-eme ememe ncheta ncheta ya. Ọ na-emepụta akwa mkpuchi na ngwaahịa ndị jupụtara na ụdị ejiji oge a. Karịsịa, a ga-ahụ mma akwa ụmụ nwanyị mara mma na agba na agba ọcha.
Mmasị . Maka ndị chọrọ ịchọta uwe ime akwa, ebe dị jụụ, e nwere ozi ọma. The Italian brand, nke a ma ama site na ezi ochichi ahịa na elu àgwà nke tailoring, kere ụdị nchịkọta.
Nhọrọ dị mma nke akwa uwe nwanyị mara mma
Ighazi njehie na ịzụta otu ụdị ihe eji eme ihe ma ọ bụ nkwonkwo, ị nwere ike "nye" onwe gị ọ bụghị naanị mmetụta nke ahụ erughị ala, akpụkpọ anụ, kamakwa iwe na ebe dị jụụ. Nke a anaghị eme ka e nwee ezi ọnọdụ. Ma e wezụga nke ahụ, ọ na-egbochi ije.
Iji gbochie nke a, ọ dị mkpa icheta na mgbe ị na-agbalị ịgba aka, ị ga-ele onwe gị anya na enyo n'akụkụ gị. Lezienụ anya na teepu-fastener. Ọ na-ata nri n'ihu, ma na-agbanye ya azụ? Nke a na-egosi na oke ya buru ibu maka ọnụ ọgụgụ ahụ. N'ọnọdụ ahụ mgbe teepu-fastener, n'ụzọ dị iche, na-egbochi ya, na-egbochi iku ume nkịtị, mgbe ahụ ọ dị ntakịrị.
Na-atụgharị akụkụ ihu, ịkwesịrị ile iko. Wrinkles? Nke a pụtara na nha dị oke. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-agba ma ọ bụ na igbe ahụ daa, ya mere, ọkpụkpụ ahụ dị obere.
Kedu ihe ọ bụ, bodice zuru okè? Mgba akwa kwesịrị ibuli igbe ahụ, buru ya gaa n'etiti. Ọ bụghị ihe a na-ahụ anya n'okpuru uwe na, n'ezie, ọ dịghị mkpa ka edozi ya kwa awa.
Nhọrọ nke panties, mgbe ahụ, ịhọrọ uwe akwa a na-ahọrọ na-adabere na akpụkpọ ahụ, ihe nlereanya ahụ adabaghị nke ọma, n'emeghị ihe ọ bụla ga-ekwe omume, ma ọ bụghị dị ka akpa. Tụkwasị na nke a, na uwe dị otú ahụ, akpụkpọ ahụ nke ebe dị nso kwesịrị "iku ume".
Bordeaux akpụkpọ ụkwụ
Nwanyi isi na ndi na-agbanye
Ndị na-esi ụgbọ mmiri na-agba ọsọ na oyi na snow
A na-eji ụkwụ na-acha uhie uhie
Ụlọnga Ụlọ akwụkwọ
Uwe uwe silk - 36 foto nke ụdị ejiji maka ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ
Ngwunye ụkwụ ndị inyom - gịnị bụ ha na otu esi ahọrọ ha n'ụzọ ziri ezi?
Foto maka bat
Okpokoro odo na ovary ekpe
Ngosiputa Ngwa maka ntachu na solarium
Ntak-a na-atụ apple apple na apụl?
Mkpụrụ ice cream
Omelette na ngwugwu
Na-eji ejiji nke ime akwa bat
Squid siiri - Ezi ntụziaka na mushrooms
Orlando Bloom kwuru banyere "gba ọtọ" foto, mmekọrịta ya na nwa ya na ezumike na Katy Perry
Mmanụ na-esi ísì maka ntutu - ụzọ kachasị mma isi jiri ụdị ntutu niile
Ebe obibi oyi dị ndụ
Pisces na Gemini - Mmekọrịta na Ndụ na Ịhụnanya
Nri maka ovary polycystic
Olee otú ị ga-esi zọpụta gị?